Maraykanka oo ka walaacsan dekada Jabuuti ee laga wareejiyay DP World - BBC News Somali
Waxa uu sheegay in ciidammadda ay wajihi doonaan "cawaaqib daran" haddii Shiinaha uu halkaas soo galo.
DP World ayaa go'aanka dowladda Jabuuti ku tilmaamtay mid sharci daro ah, waxayna dacwad ka furatay maxkamadda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta London.
Jabuuti waxaa degan ciidammo Maraykanka ah oo gaaraya illaa 4,000, waxaana jirta in Shiinuhuna uu saldhig ka furtay meel aad ugu dhow kan Maraykanka.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha, Geng Shuang oo Beijinh ka hadlayay ayaa sheegay in dowladiisa aysan waxbo kala soconin xaalada dekada Dooraale. Wuxuu intaas ku daray in iskaashiga Shiinaha kala dhaxeeya Afrika uusan ahayn mid lid ku ah dal seddexaad, sida uu hadalka u dhigay.
Jeneraalka waxa uu sheegay in Maraykanka uusan la ekeysan karin mashaariicda uu Shiinaha ka dhisayo Afrika, wuxuuna xusay in ay xitaa dhisayaan dhismayaal laga dukaamaysto, dhismayaal dowladeed iyo xitaa garoomo waaweyn oo kubbadda lagu ciyaaro.
Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in nooca maalgashi ee Shiinaha Afrika ku samaynayo ay "dhiirogalinayso dhaqanka ku tiirsanaanta" ee Afrika.